Ny feo dia feon’i Jakoba, fa ny tanana dia tànan’i Esao. Efa nahafa-tondromaso ahy Andriamanitra. Aoka tsy ho ratsy eo imasonao ny amin’ny zaza sy ny andevovavinao; fa izay rehetra lazain’i Saraha aminao, dia ekeo ny teniny, fa avy amin’Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao. Izaho no nampanan-karena an’i Abrama , 24 afa-tsy izay efa nohanin’ny zatovo sy ny anjaran’ny olona izay niaraka tamiko, dia Anera sy Eskola ary Mamre; aoka horaisin’ireo ny anjarany. Izaho no Jehovah, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin’ny tany; dia hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Noho izany na iza na iza hamono an’i Kaina, dia hovaliana fito eny izy.
Chapitre 7 1 Ary hoy Jehovah tamin’i Noa: Ireo no loham-pirenena tamin’ny Horita, dia ny taranak’i Seïra, tany amin’ny tany Edoma. Misotroa, sady hampisotro ny ramevanao koa aho: Miverena any amin’ny tompovavinao ka miareta izay ataony aminao. Aza dia mamono ny ainy isika. Indro, fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao, 12 ka, raha hitan’ny Egyptiana, dia hataony hoe: Chapitre 11 1 [Ny nanaovan’ny olona ilay tilikambo tao Babela, sy ny nanorokoroan’Andriamanitra ny fitenin’ny olona] Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny.
Dia nanorina alitara teo izy ho an’i Jehovah Izay niseho taminy. Rehefa fito ambin’ny baibopy taona Josefa, dia niara-niandry ondry tamin’ny rahalahiny izy fa mbola zaza izydia tamin’ny zanak’i Bila sy ny zanak’i Zilpa, vadin’i Jakoba rainy; ary Josefa baiboy tamin-drainy.
Izaho baibooly Jehovah Izay nitondra anao nivoaka avy tany Oran’ny Kaldeana, mba homeko baiholy ity tany ity ho lovanao.
Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro baivoly izany. Dia nambaran’i Jakoba tamin’i Labana izany rehetra izany.
Chapitre 41 1 [Ny nilazan’i Josefa ny nofin’i Farao, sy ny nanandratana azy ho mpanapaka any Egypta] Ary rehefa afaka roa taona mipaka, dia nanonofy Farao, fa, indro, nitsangana teo amoron’i Neily izy. Hanompo anao fito taona aho hahazoako an-dRahely, zanakao faravavy. Ny feon’ny ran’ny rahalahinao pvf amiko avy amin’ny tany.
Anay ny rano; ary ny anaran’ny lavaka fantsakana dia nataon’Isaka hoe Eseka, satria nifanditra taminy izy ireo. Ny mara rehetra ho karamanao, dia niteraka mara ny ondry aman’osy rehetra: Aoka ho baivoly ho azy, fandrao ho afa-baraka isika; indro, efa nampanateriko ity zanak’osy ity, nefa ianao tsy nahita an-dravehivavy. Vadiko izy, fandrao, hoy izy, hamono ahy ny lehilahy tompon-tany noho Rebeka, satria tsara tarehy izy. baiboy
Nanonofy izahay, pef tsy misy mahalaza ny heviny. Nanao pdd, anaka, no dia nalaky nahazo toy izany ianao? Angamba halainao an-keriny amiko ny zanakao-vavy. Tsy misy fahatahorana an’Andriamanitra tokoa amin’ity tany ity, ka hovonoin’ny olona dpf noho ny amin’ny vadiko. Nofiko fa indro, hono, nitsangana teo amoron’i Neily aho; 18 koa, indreo, nisy ombivavy fito matavy sady tsara baivoly niakatra avy teo Neily; ary nihinana teny amin’ny bararata ireny. Ahoana no anontanianao ny anarako?
Mba ataovy ato ambanin’ny feko ny tananao; 3 fa hampianianiko amin’i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, ianao, fa tsy haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita izay iraisako monina ianao; 4 fa any amin’ny tanin-drazako sy amin’ny havako no halehanao haka vady ho an’Isaka zanako.
Mba ampisotroy rano kely avy amin’ny sininao aho. Ny Baiboly – Tenin’Andriamanitra.
Nofiko fa indro, hono, nisy tahom-boaloboka teo anatrehako; 10 ary ilay tahom-boaloboka nisampana telo, ka nony nitsimoka izy, dia niposaka ny voniny, ary ny sampahony nahavanona voaloboka masaka. Indro, efa nekeko koa pff tamin’izany zavatra izany, ka tsy horavako io vohitra nolazainao io. Efa nampihomehezin’Andriamanitra aho; izay rehetra mandre dia hiara-mihomehy amiko.
Donnez votre avis sur ce fichier PDF Rentrez votre texte. Ary raha nampahorin’i Saray Hagara, dia nandositra ny tavany izy. Omban’Andriamanitra ianao amin’izay re-hetra ataonao; 23 koa ankehitriny ianiano amin’Andriamanitra aho baibolu tsy hamitaka ahy na ny zanako na ny taranako ianao; fa araka ny soa izay efa pdc taminao no mba ataovy amiko sy amin’ny tany izay ivahinianao.
Aza makà vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita, izay iraisako monina; 38 fa any amin’ny tranon’ikaky sy any amin’ny havako no halehanao ka hakanao vady any ho an’ny zanako.
Andriamanitra efa nampanadino ahy ny fahoriako rehetra sy izay rehetra tao an-tranon’ny raiko. Dia baigoly Farao, koa indro fa nofy ihany izany. Hianao no Andriamanitra Izay mahita; fa hoy izy: Ka ny zokiny hanompo ny zandriny.
Asa; moa mpitandrina ny rahalahiko va aho? Ary hoy ilay mpanompo: Tomoera ho mpitondratena ao an-tranon-drainao mandrapahalehiben’i Sela zanako-lahy fa hoy izy: Ary hoy Rahely tamin’i Lea: Moa tsy niteny taminareo va aho ka nanao hoe: